Impilo nemvelaphi kaC redo Mutwa - Ilanga News
Home Izindaba Impilo nemvelaphi kaC	redo Mutwa
Impilo nemvelaphi kaC	redo Mutwa
nangu ucredo mutwa ebengimazi kuloba uvvo mkhize
UCredo Mutwa obaziwa ngokuba yisanusi, uzofihlwa mhla ka-4 kuMbasa (April) emathuneni aseKuruman. isithombe ngabe: wordpress.com
UVUSAMAZULU Credo Mutwa wazalwa mhla ka-21 kuNtulikazi (July) ngo-1921 njengoba esishiye mhla ka-25 kuNdasa (March) ngo-2020.
Ubaziwa ngokuba yisanusi nakuba abanye bebembiza ngesangoma. Ukuphike kaningi ukuthi uyisangoma. Ekwelapheni kwendabuko ngikuchaza encwadini ethi: Umsamo Ubizo Nokwelapha Kwendabuko, izinhlobo zokwelapha ngizehlukanisa kahla-u: isangoma, umbelethisi, ingcibi, umfembi, umthandazi bese kuba abalozi. Isanusi nabalozi yilona qophelo eliphezulu umuntu asuke enikezwe lona.
Kunzima ukufinyelela ezingeni labalozi ngoba kunemicikilisho eminingi, nakhona ekubeni yisanusi. Baningike ekwelapheni kwendabuko abahlale bedlala ngabantu bethi babakhuphulela abalozi. Impande yabalozi nokuba isanusi kayikho, yithongo lizenzela lona.
Nakubaba uCredo kwabanjalo.
Ubengumbhali wezincwadi abuye alande imilando yezehlakalo ezithize zezwe. Ubebikezela izinto ezizokwenzeka, okwenza ukuthi izifundiswa eziningi ezimhlophe zamanyuvesi aphesheya kwezilwandle zangakholelwa kwakushoyo.
Ubekuphika okuthinta inkolo enkulukazi emhlabeni ngoJesu. Ezincwadini azibhalile kuneyokugcina ethi: “Tree of Life Trilogy” ebimi phezu kwamaseko encwadi yakhe eyaduma kakhulu umhlaba wonke, ethi: “Indaba My Children”.
Ngo-2018 wahlonishwa ngendo-ndo USIBA wuMnyango Wezama-Siko namaGugu kuleli ngobuhlakani kwezobabamkhulu namathongo aleli lizwe. Uyise wabe engumfelwa, washonelwa yinkosikazi yakhe ngenkathi ehlangana nowaba ngumama wakhe.
Uyise wayenezingane ezintathu enkosikazini yokuqala, engumakhi wezindlu, unina eyintombazanyana engumKhatholika. Kuyavela ukuthi kwaMutwa kwakuwumndeni owawukholelwa kakhulu
ezintweni zeSintu, inkolo yobu-Krestu bengayizwa kahle.
Lokhu kwaba nzima kuCredo uma esekhula ngoba wazithola ephakathi kwenkolo yobuKrestu nomZulu onguyise owayebizwa ngeqaba noyisemkhulu owayeyisigagayi sempi. Kwaphoqa ukuba akhulele koninalume, okwathi kamuva indaba yakhe yokugula yabaxaka kwase kuqala izimpawu zabadala.
Kulaphoke kwadingeka ukuba bamthathe abakwaMutwa bazomhlalisa nabo. Kuleso simo unina noyise kwaphoqa ukuba behlukane, ngokuthi uzalelwe ngaphandle komshado. Wagcina esethathwa ngumalumekazi wakhe, owamkhulisa. Kuleyo mpiloke wathathwa ngumfowabo kayise okunguyena owamusa ngaseNtshonalanga yeNatali njengamanje iKwaZulu-Natal, ngaseMkhomazi.
Nokho akakwazanga ukuya esikoleni kwaze kwaba uneminyaka ewu-14. Kuthe ngo-1935 uyise wathola umsebenzi eNtilasifali, njengamanje iGauteng, kulapho awuthatha wonke umndeni wafudukela khona. Kusuka lapho kwaqhubeka ukugula okungazange kwaqondakala ukuthi ngabe kwakuyini, kwazanywa yonke inhlobo yemithi okwagcina ngokuba abuyiselwe KwaZulu-Natal.
Kukhona konke ukugula wagcina esindiswa nguyisemkhulu okwakuthiwa uyiqaba, uwumhedeni. Ukuthi ikhehla lenzani kuyena akwazi muntu kodwa yilona elagcina limsizile, waphila. Kuthiwa ngumalumekazi wakhe owaba nesandla ekumthwasiseni.
Kwenzeka konke lokhu nje, useqalile naye ukubuza imibuzo eminingi ngezinto ezazenzeka kwabamnyama, inkolo yobuKrestu nezinkolelo zabo. Umbuzo omkhulu owethusa abaningi esemmcane wawuthi: “Babeyephi abamnyama ngenkathi umlungu efika, nathi kungukuhlakanipha, ngabe abamnyama babengahlakaniphile kumbe babeyizilwane zasehlathini?”
Uyisemkhulu wakufaka kwangena engqondweni yakhe ngaleso sikhathi ukuthi ugula nje yingoba abadala bafuna ukumnika lo msebenzi omkhulu wokutakula isizwe esimnyama esidukile. Nebala wahamba wayothwasa njengalokhu base bemkhombile lapho asizwa khona ngumkhulu kanjalo nomalumekazi wakhe.
Wathwasiswa yisangoma esasisincane kakhulu, okwakunguMyhna.
Iqhubekileke impilo okuthe ngo-1974 wathola indawo e-Oppenheimer Gardens, ngaseSoweto, lapho kwakufanele ukuba akhe khona isigodlo sokusebenzela nokwenza izinto azitshelwa ngabadala okuyibona abamengamile.
Kule ndawo wakha izindumba zokusebenzela, okwakuyisigodlo ayezokwelaphela kusona, aphinde afundisele khona abantu nabo abanobizo olufanayo.
Okwamangaza wukuthi kulesi sigodlo konke akwenza wayekucobelela kulona lonke ilizwekazi lase-Afrika, imifanekiso yezithombe zemibazo, okwakutshengisa izinkolelo zezizwe ngezizwe zase-Afrika, hhayi iNingizimu Afrika kuphela. Ngalesi sikhathi umphakathi wawungene shi enkolweni yobuKrestu ungezwa lutho ngezinto zesiNtu.
Ezimfundisweni zakhe wafundisa kakhulu ngamatshe amadala asendulo eGibhithe, ikhalenda lethu lasemandulo lobabamkhulu, lapho ayethi khona kukhona lapho kwaba khona i-Empire yokuqala, i-Empire of the Kemet eyake yabusa umhlaba okuyiyona eyaletha impucuzeko emhlabeni jikelele.
Ingxenye yeningizimu ye-Afrika yiyona eyaletha impucuzeko emhlabeni jikelele, ngakho kayikho into okuthiwa impucuko yaseNtshonalanga neyase-Afrika ngoba abaseYurophu bafundiswa e-Afrika, ngakho bayizingane zase-Afrika.
Ezimfundisweni zakhe, ubekholelwa kakhulu ekutheni konke okwenzeka kumuntu omnyama njengodweshu olukhulu olwasuka eGoli lwahlukumeza umuntu omnyama, yingoba umuntu omnyama walahla izimpande zakhe.
Ngokwakhe, ukwehlukana phakathi kwabamnyama nabantu abamhlophe ubekukhuthaza ngoba singefani ukuze sigcine amasiko nesiNtu sethu ngaphandle kokugxamalaza.
Ngo-1976 umuzi wakhe washiswa ngabafundi eSoweto, eGoli emuva kokuba bacaphuna inkulumo yakhe bayihlanekezela emsa-kazweni wesiBhunu, ngakusho bethi ukhuthaza ukuhlukana nokungahlangani kwezinhlanga. Lokhu kwaphinda futhi nango-1980 ngenkathi sekubhikishelwa uMkhandlu wase-West Rand.
Emuva kokushona komfana wakhe, ebulawa ngababhikishi bezepolitiki nokushiswa komuzi wakhe okwesibili, kulapho asuka khona eSoweto wayovula isigodlo esisha eLotlamoreng, eMahikeng, ngaleso sikhathi eyayaziwa ngeBophuthatswana.
Kulapho afike wazinza khona wakha isigodlo esincane, kunezindlu kumbe izindumba ezazimele izinhlobo ngezinhlobo zamasiko esiNtu saleso naleso sizwe esimnyama sase-Afrika. indawo eyaziwa ngokuthi iKwaKhaya Lendaba Cultural Village, isekhona namanje eSoweto, isavulelwe wona umphakathi, mahhala.
IZIBIKEZELO ZIKABABA Umutwa
Nakuba izithombe zemibazo eminingi laphaya KwaKhaya Lendaba azibaza yena zazingajwaye-lekile, kodwa okukhulu wukuthi zazixoxa umlando ngezimo ayeboniswa zona, ezinye zazo kuthiwa zaziyizibikezelo zokuzokwenzeka.
Okuphawuleka kakhulu ukubikezela ukufika kwesifo i-HIV/Aids eNingizimu Afrika, lokhu kwatshengiswa ngeNkosi uKhandakhulu, owayenabafazi abangu-200, ongakwazanga ukuba abenelise bonke ngokocansi kanye kanye, okwenza ukuba bagcine behamba belalwa base bethola leli gciwane abagcina belithelela naye uKhandakhulu, wagcina esitholile lesi sifo sase sifafazeka kanjalo.
Izilonda ezazisesithweni sangasese sikaKhandakhulu zitshengisa uphawu esiloba kunguphawu lwaso lesi sifo, ingculaza. Le mibazo yabazwa ngo-1979 ososayensi bengakasazi nakusazi lesi sifo.
Okunye akubikezela kwaba yisimo samabhanoyi ashayisa amabhilidi amabili e-World Trade Center, ngoMandulo (September) 11 ngo-2001, e-USA.
Kwaphinda futhi kwaba ukubulawa kukaChris Hani, kwaphinda futhi kwaba ukungaqedi isikhathi sokuphatha kowayenguMengameli, uMnu Thabo Mbeki. Khona lapho wayeseyishilo impi yase-Iran.
Kuyakholakala ukuthi isifo lesi esikhona se-Corona ubeseshilo kwenye yezinyanga ukuthi kuyokuba khona impi enkulu eyobhubhisa umhlaba wonke kodwa futhi ayoyishiya isekhona emhlabeni njengalokhu ehambe isabambene nje.
Ubaba uCredo ubengumuntu obekhuthaza kakhulu ukuba kuse-tshenziswe imithi yesiNtu kuneyesilungu. Lokhu ubekubhekise kakhulu ekutheni likhona ikhambi lokwelapha isifo sofuba kanjalo nesifo sengculaza inkinga nje ukuthi sibanjwe ngabamhlophe abathi konke akube yisayensi.
Waqala isikhungo esibizwa ngeVulinda Trust ngo-1999 ukugcina izindlela nocwaningo lwemithi yethu yesiNtu, kanti ucwaningo lwakhe belugxile kakhulu empandeni unwele. Kuningi obekusenziwa ngososayensi akade sebeqalile ukuthi babheke konke abekusho nokho isikhathi sakhe bese siphela.
UBUDLELWANE NEZIGAGAYI ZOMHLABA
Lihle iqiniso futhi kufanele ukuba silisho ukuthi ubaba uCredo bani-ngi abadlale ngesipho sakhe, nangaye uqobo. Ubengumngani omkhulu womunye wababhali baphesheya kwezilwandle, uDavid Icke, abhale ngisho nezincwadi ezithile naye, kodwa akukho lutho olubambekayo olutshengisayo ukuthi kukhona okuyinzuzo akutholile kukhona konke lokhu.
Imibhalo yakhe eminingi kukho-lakala ukuthi ibanjwe ngabaphesheya kwezilwandle okungaqondakali njengalokhu ehambile nje ukuthi kukhona yini okuzotholwa yisizukulwane sakhe na.
UKUBA NYAMANAMBANA KUKABABA Umutwa
Ubaba uCredo uzakhele ukungathandeki ezinhlakeni eziningi ezehlukene. Okokuqala nje uzakhele isigcwagcwa emakholweni eNkolo yobuKristu.
Kuningi akusho ngobuKrestu, okuthi uKrestu akazange asifele, okwesibili uKrestu wayenendodana njengabo bonke abantu lokhu okwenze ukuthi izifundiswa eziningi umhlaba jikelele ikakhulukazi ezimhlophe, zingamthandi.
Kunamaphepha abhalwe yizifundiswa zimchitha zithi kayikho into ayiyona, ukhohlisa umhlaba.Nakuleli akazange athandeke kuhulumeni wobandlululo nakuhulumeni okhona njengama-nje. Ukungazemukeli nokungazithandi izinyanga, kuqale ngokuvela ngaye uhulumeni.
Ubaba uCredo uze uyohlala ngenhlupheko nje eKuruman ngakho njalo ukubaleka, uhulume-ni engamnakile, okuze kwathi ngoba Umsamo Institute usumenzela umgubho weminyaka engu-98 azalwa, kwethulwa nencwadi egameni lakhe, kwaba yima uNgqongqoshe weZamasiko Nezemidlalo, uMnu Nathi Mthethwa esesukuma sebethi bamakhela indlu.
Nakhona umbuzo uthi leyo ndlu yakhiwe emagcekeni akwabani ngoba akuwona umuzi wakhe lona okwakhiwe kuwona. Inkinga enkulu ukuthi siyathanda ukuzenzisa, sincome amaqhawe akithi ngoba esehambile kakadeni sesazi ukuthi ngeke lisavuka liqhube amaqi-niso ebeliwasho.
Ngamanye amazwi siyisizwe esikhululeke NGAMANGA.
OKUFANELE SIKUFUNDE NGOBABA Umutwa
Ubaba uCredo ubezazi ukuthi uyisanusi, akakhona okunye. Ushiye umlando (legacy) izingane eziyowukhomba, zifunde futhi ngawo. Ngikusho lokhu ngoba abathwasi banamhlanje kabazazi ukuthi bathwase bayini nokuthi umuntu uma edlula emhlabeni, uyokhunjulwa ngani.
Sinabelaphi abangaphezulu kwezigidi eziyishumi kodwa bonke abazazi ukuthi bangenwa ubani, bathwaselani, bayini, angisayiphathi ukuthi umuntu uma esehambile uyokhunjulwa ngani.
Kuyogcinwa ngokuthi kwakukhona isangoma laphaya. Ubaba uCredo masimlandele, sifunde kuyena, njengalokhu kuthiwa wayehola abanye abelaphi, abagcina futhi kuyibona abamdayisa kuze kushiswa umuzi wakhe eGoli.
Ubaba uCredo akalale ngoxolo, ugodukile, ambizile amakhehla akubo, nokho ushiye thina nabantwana bakhe abane (4) emaswini ayisishiyagalombili (8) ayenawo, abazukulu abayi-12 nesizukulwane esiwu-15.
Uzofihlwa mhla ka-4 kuMbasa (April) emathuneni aseKuruman, kanti kunezinkonzo zokumkhu-mbula ezihlelelwe eGauteng, eLimpopo naseKZN.
IMIBHALO KABABA Umutwa
Nansi imibhalo yakhe ayishiyile:
“Indaba, My Children”(1964).ISBN: 0-8021-3604-4, 1st American Edition (March 1999)
“Zulu Shaman: Dreams, Prophecies, and Mysteries” ISBN:
0-89281-129-3, 2nd edition (10 October 2003)
“Songs of the Stars” ISBN:1-886449-01-5, 1st edition (May 2000)
“Africa Is My Witness, Johannes-burg: Blue Crane Books, 1966. ISBN unknown
“The Reptilian Agenda”with David Icke and Credo Mutwa – the complete series. “My People, the Writings of a Zulu Witch-Doctor” (Penguin Books, 1977) ISBN:0-14-003210-X
Okuningi abekukhuluma kusatshalaliswe kuma-DVD atholakala ezindaweni eziningi. Kuningi akusho cishe osekuzobhekisiswa namhlanje, ngoba kakade iqhawe livuka ngoba selifile imisebenzi yalo iqale phansi ivundululeke.
LALA QHAWE: UZE USIPHONSE-LE IMPANDE YOKUBUYISA ISIZWE SAKITHI ESIMNYAMA, SILAHLEKILE, SIBHAJWE ODAKENI.
BHEDLINDABA “VVO” kaLuPHUZI MKHIZE
Previous articleI-corona igadle kumgadli weJuventus
Next articleowesilisa ongaganiwe uba ngumfana aze afe